Olee otú Jiri WondersharePDF Password Remover
Wondershare PDF Password Remover Bụ ọkachamara PDF ngwá ọrụ na-ewepu mmachi na PDF Iṅomi, edezi na-ebi akwụkwọ. Ke ama okodorode PDF nchebe, ị nwere ike idezi PDF mfe na ịnweta chọrọ PDF faịlụ conveniently. N'okpuru ebe a bụ mfe nzọụkwụ maka esi wepụ PDF echebe na Wondershare PDF Password Remover.
Nzọụkwụ 1. Import PDF faịlụ
Pịa Add Files button mbubata PDF faịlụ. Ruo 200 PDF faịlụ na-akwado na oge
Cheta na: Ị nwere ike pịa Wepụ bọtịnụ na toolbar wepụ a họrọ faịlụ site na usoro ihe omume ma ọ bụ pịa Doro Anya bọtịnụ wepụ niile dị faịlụ.
Nzọụkwụ 2. Mee ka mmepụta nchekwa maka exported PDF faịlụ
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzọpụta exported PDF faịlụ na nchekwa ebe isi iyi faịlụ ndị, biko họrọ nhọrọ Save na otu nchekwa dị ka isi iyi na mmepụta Setting ebe. Ọ bụrụ na ị chọrọ ezipụta ihe mmepụta nchekwa maka exported PDF faịlụ, biko pịa Hazie na pịa Chọgharịa button ezipụta a nchekwa na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3. Wepụ PDF mgbochi
Ọ bụrụ na ọ dịghị mkpọchi na-egosi na Wondershare PDF Password Remover, ọ pụtara na PDF faịlụ na-echebe site Iṅomi, edezi na-ebi akwụkwọ. Na nke a, ị nwere ike wepu mmachibido kpọmkwem site na ịpị Malite bọtịnụ. Ọ bụrụ na a mkpọchi egosi na PDF item mmanya, ọ pụtara na PDF na-echebe site oghere. Ọ bụrụ otú ahụ, tupu ị pịa Malite button, i kwesịrị itinye nri paswọọdụ kpọghee PDF faịlụ mbụ.